Liverpool Oo Boos Fiican Loo Saadaaliyay, Kooxaha Reer Manchester Oo Hoos U Dhacaya Iyo Qiimayn Lagu Sameeyay Horyaalka Lacagta Kubbada Cagta Aduunka. - Gool24.Net
Liverpool Oo Boos Fiican Loo Saadaaliyay, Kooxaha Reer Manchester Oo Hoos U Dhacaya Iyo Qiimayn Lagu Sameeyay Horyaalka Lacagta Kubbada Cagta Aduunka.
Horyaalka Premier League ayaa si la mid ah horyaalada kale ee Yurub waxa uu hakad ugu jiraa halista caabuqa coronavirus, laakiin waxaa la xaqiijiyay in xili ciyaareedkan la dhamaystiri doono ka hor inta aan la qorshayn xili ciyaareedka cusub ee soo socda.
Kooxda Liverpool ayaa qarka u saaran in ay markeedii 19 aad ku guulaysato koobka horyaalka England waxayna u baahan yihiin 6 dhibcood oo kaliya iyada oo u baahan in ay laba kulan oo kaliya guulaystaan si ay koobka xisaab ahaan si rasmi ah ugu guulaysato.
Laakiin guusha Liverpool waxay noqon doontaa mid ayna soo dhawayn doonin kooxaha reer Manchester City sababo kala duwan iyada oo la ogaaday in xifilka cusub ee Liverpool iyo Man City iyo kii soo jireenka ahaa ee Reds iyo Man United uu markale noqon doono mid la hadal hayn doono.
Liverpool waxay soo gaba gabaynaysaa 30 sanadood oo ay ka maqnaayeen koobka Premeir League waxayna hadda doonayaan in ay guulihii ay soo gaadheen ku dul dhisaan kalsoonida ay halka ugu saraysa ee England iyo yurub ugu sii nagaan lahaayeen.
Liverpool waxay sanadkii la soo dhaafay ee 2019 ku soo guulaysatay koobabka Champions League, UEFA Super Cup iyo Club World Cup waxayna sidaa ku noqotay kooxda abid ugu koobabka badan kubbada cagta England.
Inkasta oo saamaynta cudurka coronavirus ay waxyeelo wayn u gaysanayso dhaqaalihii badnaa ee kooxaha Yurub, haddana waxaa la saadaaliyay in Liverpool ay sanadkan 2020 soo galayso kooxaha ugu sareeya ee horyaalka lacagta kooxaha aduunka ee loo yaqaan Deloitte Football Money League.
Qiimayn lagu sameeyay kooxaha kubbada cagta ugu lacagta badan ee ku soo bixi jiray horyaalka lacagta ee Deloitte Football Money League waxay Liverpool kaga jirtay kaalinta 7 aad waxaana lacag ilaa laba milyan ah ka saraysay Manchester City balse hadda waxaa la sugayaa isbadal kii hore ka duwan.
Manchester United ayaa hore u soo ahayd kooxda ugu lacagta badan kubbada cagta England ee safka hore kaga soo baxaysya horyaalka lacagta ee Deloitte Football Money League, laakiin xog laga ogaaday sanad xisaabeedka kooxaha Manchester United, Manchester City iyo Liverpool ayaa lagu ogaaday in ay Liverpool kooxahan ka sare mari doonto qiimaynta 2020 ee Deloitte Football Money League.
Inkasta oo la filayo in horyaalka lacagta Deloitte Football Money League uu ka diwanaan karo sanadihii hore maadaama oo la filayo in saamaynta dhaqaale ee uu sameeyay coronavirus ay dhulka la gali doonto kooxo badan, haddana Liverpool ayaa loo arkaa koox awood dhaqaale oo wayn heli doonta.
Baaqashada kulamo badan oo Premier league ah iyo waliba in garoomo madhan lagu ciyaari karo kulamada hadhsan ayaa kooxaha Ingiriiska iyo kuwa Yuruba saamayn xun oo dhaqaale ku yeelan karta.
Liverpool ayaa si wayn dhaqaalaha kooxdeeda sare ugu soo qaaday koobabkii ay ku soo guulaysatay ee Champions League, UEFA Super Cup iyo Club World Cup waxayna sidoo kale lacag badan ku heshay in ay kaalinta labaad xilli ciyaareedkii hore kaga dhamaysatay Premier league.
Waxa kale oo Liverpool intaas u dheer in ay lacago aad u badan ka heleen xuquuqda baahinta TV-yada, jamaahiirta ka soo xaadirtay garoonkeeda Anfield iyo waliba shirkadaha ay heshiisyada kula jirto.
Heshiiska taariikhiga ah ee ay Liverpool la gashay shirkada Nike ee xili ciyaareedka soo socda ee sanadkan 2020 dhexdiisa bilaabi doona ayaa la filayaa in uu dhaqaalaha Reds si wayn sare ugu sii qaadi karo.
Liverpool ay lacag badan ku heli doonto koobka Premier League ee ay lixda dhibcood ee kaliya u jiraan, waxaana la shaaciyay in ay sanadkan 2020 kaalmaha hore ka soo gali doonto horyaalka lacagta kubbada cagta ee loo yaqaan Deloitte Football Money League.
Si kastaba ha ahaatee, Liverpool ayaa sanadkan 2020 la filayaa in ay noqon doonto kooxda Ingiriiska ah ee ugu sarayn doonta horyaalka lacagta Deloitte Football Money League balse ilaa hadda lama oga kooxaha kale ee Yurub in ay qaarkood ka sare mari doonto.